I-Apple isebenza kwisandi sendawo yezixhobo eziyinyani | IPhone iindaba
I-Apple isebenza kwisandi sendawo yezixhobo eziyinyani
UToni Cortés | 09/07/2021 20:00 | Ezahlukeneyo
Ngamanye amaxesha sasifunda amanqaku malunga neiglasi nyaniso eyongeziweyo I-Apple ngokungathi yayiyinto yekamva, njengaleyo ifunda malunga neemoto ezibhabhayo, okanye iikhabhathi zetafile. Kodwa asazi ukuba baninzi abantu kwinkampani abasebenza kwiprojekthi enjalo yonke imihla.
Olona suku lulindelekileyo, luya kuvela Tim Cook Kwisithethi esiphambili ngokutshona kwelanga, kwaye emva koko siyakuqonda ukuba iimoto ezibhabhayo sele ziyinyani, kwaye singaya kumthengisi sithenge enye. Ukuba, ukuhlawula incasa kunye nomnqweno ...
I-Apple isebenza ekuphuhliseni inkqubo enokudibanisa amava Umsindo womhlaba we3D kumaqonga okwenyani okanye axubeneyo, enokubakho kwisixhobo esinyuswe njenge-Apple Glass, okanye iseti yentloko eyongeziweyo.
Abo bavela eCupertino basandula ukuphumelela entsha patent Echaza indawo ye-3D yomsindo yenkqubo yesicelo yesicelo kwinyani eyongeziweyo yezixhobo zombono we-3D.
Ilungelo elilodwa lomenzi lichaza ukuba, umzekelo, a Inkqubo ye-SR inokubona umntu ehamba amanyathelo ambalwa ukuya phambili, ekuphenduleni, uhlengahlengise imizobo kunye nesandi esiveliswe kumntu ngendlela efanayo nokuba ezo zinto zibonwayo kunye nezandi ziya kutshintsha njani kwimeko yokwenyani yomzimba.
Uluhlu lwamalungelo abenzi u-Ian M. Richter, uChristopher Eubank, kunye noTomlinson Holman njengabenzi balo. U-Richter no-Eubank bathiwe amalungelo abenzi abaphambili 'Iglasi ye-Apple“Ngelixa uHolman yingcali yeaudiyo kwaye esebenze kumalungelo awodwa omenzi wechiza anxulumene nee-AirPods. UHolman ukwanguye nomsunguli wenkqubo ye-THX hi-fi audio evela I-Lucasfilm. Intlekisa encinci.
Khumbula ukuba nokuba amalungelo awodwa omenzi wechiza anikezelwe kwinkampani, kunokwenzeka ukuba umbono ochazwe kuloo ngxelo ungaze uzibonakalise. Kubiza imali encinci ukwenza ilungelo elilodwa lomenzi wechiza, kwaye uqiniseke ukuba ukhuphiswano lwakho "alunakukopa" kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple isebenza kwisandi sendawo yezixhobo eziyinyani
I-CNMC iqala uphando ngokuchasene neApple kunye neAmazon ngezenzo ezichasene nokhuphiswano
Itreyila yokuqala kaMnu Corman uthotho noJoseph Gordon-Levitt